Fahadisoana amin'ny activation an'ny iMessage amin'ny iPhone? Ity ny antony & The Fix! - Iphone
Ahoana ny famadihana ny efijery ipad
raikitra amin'ny sary famantarana paoma fotsy ny iphone-ko
fanamboarana efijery tapaka iphone 6s
Fahadisoana amin'ny activation an'ny iMessage amin'ny iPhone? Ity ny antony & The Fix!
Tsy afaka mampihetsika iMessage amin'ny iPhone ianao ary tsy azonao antoka ny antony. Na inona na inona ataonao dia tsy afaka mandefa iMessages ny iPhone-nao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava aho maninona ianao no mahita lesoka fampandehanana iMessage amin'ny iPhoneo ary asehoko anao ny fomba fanamboarana ny olana ho amin'ny tsara !
Fa maninona aho no mahazo lesoka amin'ny fampandrenesana iMessage?
Misy antony maro samihafa mety ahitanao ny lesoka fampahavitrihana iMessage amin'ny iPhone-nao. Mba hampavitrika ny iMessage, ny iPhone dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny Wi-Fi na angona sela. Izy io koa dia mila mahay mandray an Hafatra SMS , ireo hafatra an-tsoratra mahazatra izay mipoitra ao anaty volo maitso.
Saika ny drafitra finday rehetra dia misy fandefasana hafatra SMS, fa azonao atao ny manamarina indroa ny kaontinao raha manana drafitra voaloa mialoha ianao. Mety mila manampy vola amin'ny kaontinao ianao alohan'ny handraisanao SMS.
ahoana no ampifandraisako amin'ny findaiko ny iphone-ko
Izany rehetra izany dia milaza fa tsy azontsika antoka raha misy olana amin'ny iPhone na ny drafitry ny findainao miteraka ny lesoka fampandehanana iMessage. Araho ny torolàlana isaky ny dingana etsy ambany hamaritana sy hanamboarana ny tena antony mahatonga anao hahazo lesoka rehefa manandrana mampihetsika ny iMessage ianao!
Ataovy azo antoka fa tsy nirehitra ny maody fiaramanidina
Rehefa mandeha ny maody Airplane dia tsy hampifandray Wi-Fi na tambajotram-pifandraisana ny iPhone, ka tsy ho afaka hampavitrika iMessage ianao. Misokatra Fikirana ary alao antoka fa ny switch eo akaikiny Fomba fiaramanidina tsy mandeha.
Raha tsy mandeha ny Airplane Mode dia andramo ny manodina azy hatrany sy mamono azy. Indraindray io dia afaka manamboatra Wi-Fi kely sy olana amin'ny fifandraisana finday.
Zahao ny fifandraisanao amin'ny data Wi-Fi sy sela
Ny iMessage dia tsy afaka miaina raha toa ka mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi na angona finday ny iPhone. Tsara ny manamarina indroa ary alao antoka fa mifandray amin'ny Wi-Fi na angona finday ny iPhone! Voalohany, sokafy Fikirana ary tap Wifi hijerena raha mifandray amin'ny Wi-Fi ny iPhone-nao.
Hamarino tsara fa efa mandeha ny switch eo akaikin'ny Wi-Fi ary misy marika famantarana manga eo akaikin'ny anaran'ny tambajotrao. Raha mandeha ny Wi-Fi dia manandrama manodina azy ary miverena.
iphone 6 efijery vaky fanamboarana
Manaraka, mandehana any amin'ny Settings, tap finday , ary alao antoka fa velona ny switch eo akaikin'ny Cellular Data. Avereno indray, mety te hanandrana manodina ny famonoana ianao ary miverina hamerina manamboatra rindrambaiko madinidinika.
Apetraho amin'ny faritra mety ny iPhone-nao
Indraindray dia mety tsy hahomby ny fampahavitrihana iMessage raha toa ka diso faritra voafetra ny iPhone. Matetika izany dia mitranga amin'ireo olona mandeha any ivelany ary manadino ny fanavaozan'ny iPhone ho azy ny faritra misy azy.
Sokafy ny fikirana ary kitiho Ankapobeny -> Daty sy ora . Alefaso eo akaiky eo ny switch Mametraha mandeha ho azy hahazoana antoka fa napetraka amin'ny daty sy ora ara-potoana marina ny iPhone-nao!
Atsaharo ny iMessage ary avereno
Ny fanilihana ny iMessage sy ny fiverenany indray dia afaka manamboatra glitch kely izay manome ny iPhone lesoka fampandrenesana iMessage. Voalohany, sokafy ny Settings ary tap Hafatra .
Tsindrio ny switch eo an-tampon'ny efijery eo akaikin'ny iMessage mba hamonoana azy. Kitiho indray ny switch mba hamerenanao ny iMessage! Ho fantatrao fa mandeha izy io rehefa maitso ny switch.
ahoana no fanamboarana iphone misy fahasimban'ny rano
Matetika ny mpitatitra tsy misy tariby sy Apple dia mamoaka fanavaozam-baovao momba ny fikirakirana ny fanamoriana mba hanatsarana ny fahafahan'ny iPhone mifandray amin'ny tambajotran'ny mpitatitra anao. Sokafy ny fikirana ary kitiho General -> Momba hijerena raha misy fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra.
Matetika, pop-up no hiseho eo amin'ny efijery ao anatin'ny segondra vitsy raha misy fanavaozana. Raha miseho ny pop-up dia tap vaovao farany .
Raha toa ka tsy miseho aorian'ny dimy ambin'ny folo segondra eo ho eo ny pop-up dia mety tsy misy ny fanavaozana ny toeran'ny mpitatitra.
Hanavao ny iPhone-nao
Apple dia namoaka fanavaozana iOS vaovao hanamboarana bibikely sy fampidirana endri-javatra vaovao ho an'ny iPhone. Sokafy ny fikirana ary kitiho General -> Fanavaozana ny lozisialy . Raha misy fanavaozana iOS vaovao dia tsindrio Sintomy sy apetraka .
Misorata anarana avy amin'ny Apple ID
Ny fivoahana avy ary miverina ao amin'ny Apple ID indraindray dia mety manamboatra olana madinidinika amin'ny kaontinao. Satria mifamatotra amin'ny Apple ID ny iMessage, ny glitch kely na ny lesoka amin'ny kaontinao dia mety hiteraka lesoka fampandehanana.
Misokatra Fikirana ary paompy Ny anaranao eo an-tampon'ny efijery. Mikorisa hatrany ambany ary paompy Hivoaka . Hasaina hiditra ao amin'ny tenimiafinao Apple ID ianao alohan'ny hivoahanao.
Izao dia efa nisoratra anarana tao amin'ny Apple ID ianao, kitiho ny Hiditra bokotra Ampidiro ny ID sy ny tenimiafinao Apple hiditra ao!
maninona no tsy misy serivisy amin'ny findaiko
Rehefa hamerina ny fikirakira tambajotra iPhone-nao ianao, dia hamafana sy hamerina amin'ny laoniny ny foiben'izy ireo ny Wi-Fi, Cellular, Bluetooth, ary VPN rehetra. Mila miditra indray ny teny miafinao Wi-Fi ianao ary mampifandray indray ireo fitaovana Bluetooth ao amin'ny iPhone raha vantany vao vita ny famerenana.
Sokafy ny fikirana ary kitiho General -> Reset -> Avereno ny fametrahana ny tambajotra . Ampidiro ny kaody passcode iPhone anao ary hamafiso ny famerenanao amin'ny alàlan'ny fanoratana Avereno ny fametrahana ny tambajotra . Hikatona ny iPhone, haverina, ary hiverina indray rehefa vita ny famerenana.
vidin'ny fanamafisana ara-dalàna ny fiara
Mifandraisa amin'i Apple & Your Wireless Carriers
Raha mbola mahazo lesoka fampahavitrihana iMessage amin'ny iPhone-nao ianao dia tonga ny fotoana hifandraisanao amin'i Apple na ny mpitondranao tsy misy tariby. Manoro hevitra aho ny hanomboka ao amin'ny Apple Store, satria ny iMessage dia endri-javatra tsy manam-paharoa amin'ny iPhones. FITSIDIHANA Tranonkala mpanohana an'i Apple hananganana antso an-tariby, chat mivantana, na fanatrehanao olona manokana ao amin'ny Apple Store eo akaiky anao.
Na izany aza, raha hitanao fa tsy afaka nahazo hafatra an-tsoratra ny iPhone-nao, ny tsara indrindra dia ny mifandray amin'ny mpampita finday anao aloha. Ity ambany ity ny lisitry ny laharana fanohanan'ny mpanjifa an'ireo mpitatitra finday efatra lehibe. Raha tsy voatanisa etsy ambany ny fitateranao, Google ny anaran'ny mpitondranao sy ny 'fanohanan'ny mpanjifa' hahazoana fanampiana.
Vitanao soa aman-tsara ny mampandeha ny iMessage amin'ny iPhone-nao! Ho fantatrao tsara izay hatao amin'ny manaraka raha mahita lesoka fampandehanana iMessage amin'ny iPhone ianao. Raha manana fanontaniana hafa ianao, avelao izy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.